बजेट टेक्निकल आयो पोलिटिकल आएन: डा. चन्द्रमणि अधिकारी
Posted: 2018-06-17 14:26:24
दुईतिहाई बहुमत सहितको बाम गठबन्धन नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको संघीय बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले ल्याएको बजेट, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीसँगै आउँदै गरेको मौद्रिक नीति र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रबारे अर्थ्विद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेप...
सवारीको क्षमताका आधारमा करका दरहरू निर्धारण गर्नु सकारात्मकः शम्भुप्रसाद दाहाल
Posted: 2018-06-09 07:33:21
सुनाखरी न्युज- नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहाल सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिमा आवछ द्धन् । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेट र त्यसमा अटोमोवाइल क्षेत्र सम्वन्धी भएका ब्यवस्थाका बारेमा नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष दाहालसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेप...
तुलसीराम गौतम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक तुलसीराम गौतमले तीन दशकभन्दा लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बिताए । हालसेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको नेतृत्व सम्हालेका छन् । सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंकबाट बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका गौतमले यो क्षेत्रमा ३४ वर्ष बिताइसकेका छन् । हाल सेञ्चुरी बैंकको करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा हुँदा पनि क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो १५ प्रतिशत रहेको उनी बताउँछन् । गौतमसँग समग्र वित्तीय प्रणालीको अवस्थाका बारेमा गरिएको कुराकानीको संक्षेपः...
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौ — नेपालमा यौनका विषयमा खुलेर कुरा गरिँदैन। यौनका बारेमा जति चर्चा गरिन्छ, या त त्यसलाई असाध्यै जटिल बनाइन्छ, या अति नै हलुका। फलस्वरूप यो कतिपयका लागि चर्चा गर्न अयोग्य विषय भएको छ भने धेरैका लागि अतिरञ्जित विषय। फ्रायडले धेरै अघि मानिसका सबै जसो क्रिया यौनमा आधारित हुन्छ भन्ने व्याख्या गरिसक्दा पनि फ्रायड पढेको नेपाली बौद्धिक वर्गले पनि यसलाई स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन। यो गम्भीर विषयमा मनोविज्ञ करुणा कुँवर भने प्रस्ट छिन् ।...
भवानी राणा/ अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ- मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि तेस्रो बजेट ल्याइँदै छ । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ का लागि यही जेठ १५ गते संघीय सरकारले ल्याउने बजेटमा यसअघि अभ्यास नभएको वित्तीय संघीयता अवलम्बन गरिने छ । संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि असार १ र १० गतेभित्र क्रमशः प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउँदैछन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग गरिएको कुराकानीको संक्षेपः...